Lisa Brown Archives - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Archives Tag: Lisa Brown
Xilliga Xagaaga ayaa ku habboon in loo baxo wadada si loo hubiyo la-hawlgalayaasha badan ee ka caawiya Ganacsiga inay fuliyaan himiladeenna xoojinta bulshada. Waxba kama helo wax ka badan sida tooska ah ee aan uga barto shakhsiyaadka iyo ururada gobolka oo dhan sida aan wax u qabanno iyo sida aan ugu sii fiicnaan karno hagaajinta nolosha dadka aan u adeegno. Waxaa jira waxyaabo badan oo muhiim ah oo looga hadlayo cusboonaysiintaan kooban
Dhaqaalaha gobolka, iskaashiga tooska ah ee WEDA
Had iyo jeer waa wax lagu farxo in lala soo ururiyo hogaamiyaasha dawladaha hoose, qabiilooyinka, ururada ka shaqeeya horumarinta ganacsiga (ADOs) iyo la-hawlgalayaasha kale ee bulshada si aan ula wadaagno guulaheena, fursadaha iyo fikradaha cusub ee Shirka Xagaaga ee Ururka Horumarinta Dhaqaalaha Washington. Marka laga soo tago ka qeyb qaadashada laba maalmood oo weyn oo dhageysi, barasho iyo isku xirnaan ah, waxaan sidoo kale fursad u helay inaan la hadlo kooxda. Waxaan la wadaagay natiijooyin wax ku ool ah xilli ciyaareedkii hore - bilowgii
Dareenka ugu horreeya, wada sheekaysiga muhiimka ah
Waxaa qoray Lisa Brown, Agaasime Way adag tahay in la aamino in bil ay ka soo wareegtay markii aan aqbalay magacaabista Gov. Inslee si aan u hoggaamiyo Waaxda Ganacsiga. Waan ogaa inay tani ii noqonayso fursad xiiso leh oo aan ku dabaqo khibradeyda xagga dowladda, sayniska caafimaadka iyo dhaqaalaha si aan u hor mariyo himilada wakaaladda ee xoojinta bulshada ku nool gobolka oo dhan. Haddii toddobaadyadan ugu horreeya ay yihiin wax tilmaam ah, waxaan ku jiraa a